बिहीबार ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य ! - Everest Dainik - News from Nepal
बिहीबार ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य !
काठमाडौंः लगातार बढिरहेको सुनको मूल्य बिहीबार भने घटेको छ । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा एक हजार रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी कारोबार व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार छापावाला सुन तोलामा ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार छापावाला सुन तोलामा ७२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
बुधबार ७१ हजार सात सय रुपैयाँँमा कारोबार भएको तेजाबी सुन बिहीबार प्रतितोला ७० हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बिहीबार तेजाबी सुनको मुल्य पनि एक हजार रुपैयाँ घटेको छ ।
चाँदीको मूल्य आठ सय ६५ रुपैयाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ । चाँदी बुधबार तोलामा आठ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस मूल्यले कीर्तिमान बनाएपछि ७५ प्रतिशतले घट्यो सुनको बिक्री